Ny filoham-pirenen'i Tanzania dia mametraka famerenam-bolo be fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Ny filoham-pirenen'i Tanzania dia mametraka famerenam-bolo be fizahan-tany
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny filoham-pirenena Tanzania Samia Suluhu Hassan dia nanangana programa fanadihadiana momba ny fizahan-tany izay hampiharihary an'i Tanzania alohan'ny tsenan'ny fizahan-tany manerantany, mikendry ny hisarika mpizahatany sy fampiasam-bola betsaka ao amin'ny firenena.
Ny programa fanadihadiana "Royal Tour" vao avy natomboka dia hosoratana amin'ny toerana samihafa ao Tanzania.
Amin'ity fitsidihana ity dia hanatevin-daharana ireo mpitsidika ny filoham-pirenena avy eo handray anjara amin'ny firaketana ny fitsidihana ny fandefasana sy ny fivezivezena manerantany.
Ny fandraketana ny fanadihadiana izay natao hampiroboroboana an'i Tanzania dia nanomboka ny 28 aogositra 2021, tao Zanzibar izay anaovan'ny Filoham-pirenena fitsidihana ofisialy.
Ny horonantsary fanadihadiana momba ny fizahan-tany dia hosoratana eo ambanin'ny Filohan'ny komitin'ny filoha izay handrindra ny drafitra hampiroboroboana an'i Tanzania eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary iza no sekretera maharitra ao amin'ny minisiteran'ny fampahalalam-baovao, kolontsaina, zavakanto ary fanatanjahantena.
“Ny Filoham-pirenena dia hampiseho amin'ny mpitsidika ireo fizahan-tany samihafa, fampiasam-bola, zavakanto ary zava-manintona ara-kolotsaina misy any Tanzania,” hoy ny vakiteny ampahan'ny fanambarana nataon'ny Biraon'ny filoham-pirenen'i Tanzania. Ny programa Royal Tours dia natao hanamafisana ny fifandraisana misy eo Tanzania sy ny firenena hafa, koa hanentanana ny fiaraha-miasa amin'ny fizahan-tany sy ny dia Tanzania, firenena hafa, ary fikambanana.
Nilaza ny filoha Samia fa ny governemanta dia nanomboka tetika mahery setra hanamarihana ny firenena amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ireo tombontsoa ara-toekarena misy manerantany. Taorian'ny nandraisany ny birao ambony tao Tanzania tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity, nilaza ny filoha Samia fa manantena ny hampiakatra ny isan'ny mpizahatany ny governemantanany avy amin'ny mpitsidika 1.5 tapitrisa ankehitriny ho 5 tapitrisa ao anatin'ny 5 taona ho avy.
Ao anatin'io andalana io ihany dia manantena ny hampiakatra ny vola miditra amin'ny mpizahatany ny governemanta manomboka amin'ny 2.6 miliara dolara amerikana ankehitriny ka hatramin'ny 6 miliara dolara amerikana mandritra io fe-potoana io ihany, hoy izy. Mba hahatratrarana ny tanjona kendrena, ny governemanta dia manintona ny fampiasam-bola amin'ny hotely sy fizahan-tany miaraka amin'ny fanamorana ny toerana fitsidihan'ny mpizahatany, ny ankamaroan'ny toerana manan-tantara sy ny moron-dranomasina, ankoatry ny tranonkala hafa mbola tsy novolavolaina mba hisarika ny mpizahatany.
Tanzania dia hamantatra ihany koa ireo firenena stratejika hamidy ny fizahantany amin'ny alàlan'ny iraka diplaomatika misy sy ny masoivoho miaraka amin'ny varotra mahery vaika ny vokatra safariany amin'ny sehatra manerantany. Hodinihina koa ny fandinihana ireo hetra mandrara amin'ny fizahan-tany, mikendry ny hanamaivanana ireo mpampiasa vola amin'ny haba sy ny enta-mavesatra.
Ny vokatra ho an'ny fizahan-tany, morontsiraka ary lova mpizahatany, ary koa sambo fitsangantsanganana dia faritra mety hivoarana sy hamidy mba hamandrihana mpizahatany sy fampiasam-bola be dia be - ny ankamaroan'ny hotely, fitaterana an'habakabaka ary fotodrafitrasa.
Fampivoarana ireo valan-javaboary vaovao any Andrefana Tanzania dia antenaina hampiakatra ny fizahantany ao amin'ny faritry Great Lakes, malaza amin'ny chimpanzees sy gorila mivezivezy eo anelanelan'ny Tanzania, Oganda, Rwanda, ary DR Congo. Ny valan-javaboary vaovao koa dia antenaina ihany koa hampisondrotra ny fizahan-tany isam-paritra sy intra-Afrika eo amin'i Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, ary ny Demokratikan'i Kongo (DRC).
Ny fizahan-tany dia anisan'ny sehatra ara-toekarena izay heverin'ny firenena afrikanina ho mandroso, mivarotra ary mampiroborobo ny fanambinana ny kaontinanta.
Ny Filoham-pirenena Samia dia nanao fitsidihana 2 andro tany Kenya tamin'ny volana Mey tamin'ity taona ity, avy eo dia nanao dinika niaraka tamin'ny filoham-pirenena Kenya Andriamatoa Uhuru Kenyatta, nikendry ny fampandrosoana varotra sy ny fivezivezen'ny olona teo amin'ireo fanjakana mpifanolo-bodirindrina 2. Niara-nanaiky ny fanafoanana ireo sakana hanakantsakanana ny fivezivezena ara-barotra sy ny olona eo anelanelan'ny firenena Afrikanina Atsinanana roa avy eo ny Lehiben'ny firenena roa tonta avy eo mamporisika ireo mpizahatany isam-paritra sy iraisam-pirenena hitsidika ny firenena tsirairay.
Nanome toromarika ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny izy ireo avy eo mba hanombohana sy hamaranana ny fifanakalozan-kevitra momba ny varotra handaminana ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny firenena 2. Ny hetsiky ny olona dia misy ihany koa ny mpizahatany eo an-toerana, isam-paritra ary vahiny mitsidika an'i Kenya, Tanzania, ary ny faritra Afrika Atsinanana iray manontolo.